Semalt: Kushandisa Sei Crawlboard Web Extraction Platform
kune vose pamusoro peInternet. Kana iwe chete uchida kubvisa zvishoma zvishoma deta, vadzidzisi vanogona kubatsira. Asi kana uchida kubvisa yakawanda yemadhora nguva dzose, saka iwe unofanirwa kukodha kambani ine ruzivo rwechitatu-web web scraping company. Crawlboard ndeimwe yevabatsiri vemabasa akadaro, uye vanhu vakawanda vave vachishandisa iyo yebasa ravo rekuchera web. Nzvimbo yacho inoshanda zvikuru - hospedagem de sites boa e barata. Saka, zvinokurudzirwa kune vanhu vanofanira kutsvaga mari yakawandisa nguva dzose.
Kunze kwekubudirira kwayo, zvakare zvakare nyore kushandisa. Nhanho dzisiri nyore dzinodiwa kushandiswa kwepuratifomu dzakataurwa apa.
Enda kuChellBoard pekukumbira peji peji nekudhonza iyi link. Zadza fomu yekunyora zvakakodzera. Kune minda yezita rekutanga, zita rekupedzisira, kero yekambani ye email, uye basa basa. Paunenge wapedza, ingofa bhatani rekuvhara. Tsamba yekutsvaga ichaendeswa kune kero ye-imeyeri yawakapa kuti uonekwe. Vhura email uye chengetedza paunobvumirano chekuvimbisa kuti uite iyo yeCawlBoard account yako itsva.
Chinangwa chikuru chechiito ichi ndechokuwedzera nzvimbo yekutamba, asi iwe unotanga kutanga kugadzira nzvimbo. A sitegroup iboka remasiti ane shanduro yakafanana. Izvi ndezvevanhu vanowanzodikanwa kutsvaga data kubva kune dzakawanda nzvimbo panguva imwe chete.
Kugadzira sitegroup, chengetera pa "Shandisa mutsva webasa". Inowanikwa kuruboshwe rweSitegroup box box. Mushure mezvo, iwe zvino unogona kuwedzera yese nzvimbo dzewe sitegroup imwe pashure peimwe nekunyanya paD Add link iyo iri kumusoro kwekona yepamusoro peji. Zvadaro, sarudza nzvimbo imwe neimwe.
Enda kunzvimbo yekugadzira nzvimbo yewindo kuti upe zita rakasanangurwa rewebsite yako.Yeuka kuti nzvimbo dzose dziri mu sitegroup dzinofanira kunge dzakagadzirirwa zvimwechetezvo, iwe unogona kunge usina kuwana zvakakunakira.
Kuti unzwisise kukosha kwenzvimbo yepaiti, tora basa rinonyora masayiti seenzaniso. Kana basa rakakumbirwa nderekutsvaga mabasa kubva kumapurisa emabasa, ipapo iwe unoda kugadzira nzvimbo yepaiti kuti ienzane nebasa uye nzvimbo dzose dziri mu sitegroup dzichaita mabasa ekunyora nzvimbo.
Maererano neminda inodiwa pachirongwa ichi, unoda kusarudza nguva yakawanda yekuwedzerwa kwedata, maitiro ekutakura, uye nzira yekuendesa. Frequencies of data kupera zuva nezuva, vhiki nevhiki, mwedzi, uye tsika.
Nokuda kwekutaurirana, unogona kusarudza imwe pakati pe XML, JSON, uye CSV. Uye nokuda kwekushandisa nzira, unofanira kusarudza pakati peFTP, Dropbox, Amazon S3, uye REST API.
Chiyero chinofanirwa kune mamwe mashoko. Iko kune vashandisi kurondedzera basa ravo rekutsvaga webhu zvakare. Kunyangwe zvingasarudzwa, zvakakosha kuisa ruzivo rwakawedzerwa nokuti kana iwe uchiwedzera kutsanangura basa rako, kana iwe mupiri webasa achinyatsonzwisisa zvaunoda, uye ichabereka chibereko chakanaka.
Unogonawo kukumbira mamwe mabasa anokosha-akawedzerwa pachinhu ichi. Vamwe vavo vakachengetwa indexing, Faira kubatanidza, Zvinyorwa zvekutsvaga, uye Kubudiswa kwekutengeswa.
Pano, iwe chete unoda kuvhara pa "Tumira kuti uone kukosha". Chinangwa ndechokuti mupi webasa aone kana basa rako richibvira. Iwe uchawana email kukuudza iwe kana basa rako richibvira kana kwete. Kana zviri izvo, iwe zvino unogona kuenda uye ubhadhara. Kana imwe nguva kubhadharwa kwako, Team CrawlBoard ichaita basa.
Mushure mekubhadhara, iwe unongoda kumirira deta yako kudyidzana nenzira yakatemwa newe, kuburikidza nenzira yako yaunofarira.